Dadka ee shubka
Dadka xiriirka jidhka ah ah
Dadka ee warsheeda
Goobta codsiga ah
Wixid la xiriirta
Aasaasiga birta fidiyay
Lacagta darafka shubka
Cidhibka ee la'aanta ee la'aaneysa
Mashiin xirfadda bib
Shirkadaha quutaha waxaa shirkadaha si badan loo aqoonsanayaa macaamiisha.
1 biirka xirfadeedka, ganacsiga waxaa ka leeyihiin xirfadeed ee sameeyaasha, tekiniyaasha la xiriira iyo qalabka quutaha. Isagu uu u urursay aragnimo badan oo lagu cuntoodaShilka, Inta badan waxaa ku iskuulsanayaa cunto ee shirkadda.
2 _ Kharashka yar ah ee iibsashada alaabta ah iyo gaadiidka iyo kharashka la xiriira, Sidaas daraaddeed ee shirkadda ee waxbarashada uu qiimaha.
3 Si aad u baahantahay macaamiilka ee macaamiilka, waxey u baahantahay macaamiisha uu u baahantahay, Laakiin shirkadu waxay u hawliin karaan baahantaha shaqada ee macaamiisha si aad ugu weyn, si uu uu u heli karaan ammaanka macaamiisha.
4 Brand waa sameeye xirfadeed iyo bixiyaha adeega, oo ku saaraysaa xirfadeed. Sidoo kale oo dhan alaabta sharciga ee alumiinium waa aqoonsan. iyo kuwaasu waa aqoon uu aqoonsan yahay.
5 ­ Laakiin adeegyada iibinta ka dib ma ahan mid aad u wanaagsan. Adeegyada iibnimada kadib ayaan u siinayaa muhiim weyn. Macadiiintu waxay toos la xiriiri karaan shirkadda, haddii ay dhibaatooyin ku yaala codsiga. Shirkadu wuxuu soo dirayaa shaqaalaha gaar ah inay la xidhiidhaan dhibaatooyinka macaamiisha.
Horey:Sidee uu uu isticmaalaa daahirka ee gaarga?
Ka dambe :Darteed ah
Lacagta arkaashaSidoo kale ee la yidhaahdo ee shilka ee kandela ah ama xarxada guriga, waa nooc cusbooyinka ee uu cusbo. Sidaasuu waa goobta, kuwaas oo ku jira nooc dabool ah iyo nooc daboolada. La xi...
Jidka uu uu u jeeday ee uu uheystay
Jidka ahAhJidhka la yidhaahdo waa aad u fudud. Horeyda waxaa lagu sameeyaa xidhibka kale oo dhan waxaa lagu sameeyaa xadhka kale oo kale. Xadhka la xiriiray waxaa la qaabiyaa oo lagu dhigaa fiican. Xa...
Maseysiinta ee sidii shuruuda
Sida uu sii sameeyo shahaadada,DraperyWaxaa lagu qeybin kartaa biilka korontada drapery iyo xirfadda birta ah Drapery.Drapery ee birta korontan: waa drapery ee birta korontada. Waxaa u baahnaa oo kali...
Waxbarashada la xiriirtaDaad eh:1. Dadka daahirka ee gaar ah waxaa la xiriira la xiriira la xiriira, sidaas daraaddeed waxaa loo baahnaa in uu xaqiijiyo in la xiriira la xiriira codsiga iyo saameydka....
Sidee uu kaalmooyinka ee dhismaha?
Kaalmooyinka maxay u yihiinEhDhirka?Shabakadda dhirka guriga waxaa lagu sheegaa in shabakadda dhismaha meel kasta oo dhan. Ma aynu u muujinno manfadeeda iyo sababta aynu aqoono. Markii shabakadda ee d...
Shirkadaha quutaha waxaa shirkadaha si badan loo aqoonsanayaa macaamiisha.1 biirka xirfadeedka, ganacsiga waxaa ka leeyihiin xirfadeed ee sameeyaasha, tekiniyaasha la xiriira iyo qalabka quutaha. Isag...
Dadka daahida birta ee furada
DaryeelkaDaahida birtaada:1. Dadka darafka dhar ah waxaa ka sameysaa salid la'aanta, alumiinium, naasas, booban iyo alaab kale. Markaas ku saleysaa daahirka birta waxaa ku yaal midho kala duduwan uu d...
Shaqada dhar ee wiska
Ka la xiriirtaDhar fadhiska ee wiska:(1) Taasu waa shamdii caafimaad oo ka sameysaa waxyaabo yar, yar oo uusan ah, taasoo laga jeedo, Du waxaa la xiriiray.(2) dhar buuxta mekaniska ah waxaa ka mid ah ...
Cinwaanka:East industrial Zone, Anping, Hebei, China
Xuquuqda sameynta©Lacagta ah